UKUGQIBELA: ipilisi yokuvuselelwa ngokutsha yinyani! Indoda eneminyaka ubudala ye-80 iginya okokuqala emva kovavanyo kwizilwanyana: UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo UKUBHALA, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	29 Agasti 2019	• 1 Comment
UDavid Sinclair ngunjingalwazi kwisebe lemfuzo, iBlavatnik Institute kunye nomphathi wecandelo Paul Paul Glenn Centre for Biological Mechanisms of Aging at Harvard Medical School. Kwinkcazo engezantsi, ucacisa indlela inkqubo yokwaluphala yomzimba womntu inento yokwenza ikakhulu nelahleko yolwazi; Ukuthelekiswa nokuphelelwa kolwazi kwikhasethi yemagnethi yamakhasethi amadala, njengoko isizukulwana esidala sisazi njalo. Kwenzeka okufanayo ngolwazi lwedijithali ngaphezulu kwe-intanethi, kodwa ngenxa yokuba ikhowudi yokulawula ithunyelwa ukuba ikhangele ukuba ulwazi lufika ngokwenyani okanye ifuna ukuzicaphukela, unokuyiyeka kwakhona loo ngcaciso ukuba kukho ilahleko yedatha.
Inkqubo yokwaluphala ikwaye malunga nokuphulukana kwekhowudi kwiDNA. Ngokuphenya "ukukhuhla okwenzeka kwi-CD", unokufumana ulwazi kwakhona. Ngokudibanisa 'umntu obukeleyo', apho lonke ulwazi olukuDNA lunokubuyiselwa kwakhona ngokungathi lolahlekile, ungayiphumeza le nkqubo. Okokuqala lo 'mntu ubukeleyo' wavavanywa kwiimpuku kwaye kwacaca ukuba inkqubo yokwaluphala kwiigundane inokuthi ikhawuleziswe kukushiya ngabom ikhowudi. Nangona kunjalo, umva kwakhona wajika waba kwimeko: Ikhowudi yeDNA elahlekileyo inokubuyiselwa kwaye iimpuku ziphinde zenziwa ngokutsha.
Kwinkcazo engezantsi kaDavid Sinclair uya kufumana ingcaciso ecacileyo yayo yonke le nto. Eyona nto imangalisayo, nangona kunjalo, kukuba utata oneminyaka engamashumi asibhozo wagqiba kwelokuba wayefuna ukuvavanywa ipilisi enjalo. Iziphumo azinzima kangako kwixesha nje elifutshane, kodwa kubonakala ngathi kukho ukumiswa kukhula kukaDavide kwaye uziva ngathi ubaluleke ngakumbi. Yonke le nto ziindaba ezimnandi zotshintshiselwano kwaye ukuba oku kufunyenwe kuza kuvavanyo lweklinikhi, (intengo ebiza kakhulu) intengiso ngokuqinisekileyo ayizukuthengiswa kungekudala. Kunokuqikelelwa ukuba ipilisi enjalo ngokuqinisekileyo inokuthengiswa kuphela kubantu abazizityebi nabadumileyo, ukuba kuphela ngenxa yokuba uphila ixesha elide kwaye ke kufuneka imali engakumbi ukuyigcina. Eyona nto iphambili ekufuneni ngeetrhumanists, ngokuqinisekileyo, kukungafi.
Ukuqwalaselwa kwebhayoloji kunye neDNA njengedatha yolwazi kule minyaka yedijithali kwenza ukuba uqonde ngakumbi umsebenzi wayo yonke loo khowudi. Kuqala nje, le nkqubo yokumisa kunye nokuguqula ukwaluphala kubonakala kumnandi, ukuba bekungengenxa yeengxaki ezininzi. Kuya kuthetha ntoni kwiingxowa-mali zomhlala-phantsi, kubemi abakhulayo behlabathi, ukuhanjiswa kokutya, irhafu yendalo, njl. Izisombululo ngokuqinisekileyo ziya kuyilwa ngenxa yoku, kodwa kukho inkxalabo enkulu ngakumbi. Eyona nto ixhalabisa kakhulu kukuba ngokwenza imephu kuyo yonke imisebenzi ekwikhowudi ekwiDNA yethu, sisondela kwixesha apho abantu banokuthi baphinde babekwe kude. Ayisiyiyo kuphela indawo yokudibanisa kwengqondo ka-Elon Musk kwindlela (jonga apha), kodwa ngokufakelwa kweenethiwekhi ze5G zidityaniswe (ngeenkqubo zokugonya) ukuvumela i-enzyme yokuthwala yeCRISPR-efana nokufunda nokubhala imisebenzi emzimbeni, sisondela kumzuzu wokuba zombini iingcinga zethu kunye neDNA yethu inokufundwa kwaye ibhaliweyo kwi-Intanethi. Ke asisondeli nje ekuswelekeni, kodwa sisondela kutshintsho kubantu be-android. Ndihlala ndibuza ukuba kutheni le nkqubo yokusebenza kwezo smartphones ezivela kwi-Samsung, Huawei kunye nokunye okunje, inegama elithi 'Android'. Ngaba siyayamkela injongo yokuphela kwexesha ecwangcisiweyo koku? Ngaba siyayamkela i-ajenda yexesha elide apha?
Iinkqubo zethelevishini ezifana kaJan Mulder, ohambe ekhangela ubomi banaphakade, kubonakala ngathi uyakwazi ukulungiselela abantu izinto ezizayo ezizayo. Sifumana isoseji, ngokungathi kunjalo, kwaye sifuna ukuluma. Ngubani ongafuniyo ukuhlala ngonaphakade !?
Ndilinde umzuzu! Ngaba eso sithembiso "sobomi banaphakade" asikukwenzi ucinge nangantoni na? Ngaba asiyonto iinkolo esithembisa zona? Ewe, inene iza ngoku. Ndiyakwazi ke ukucinga ukuba isithembiso somesiya ovela 'kwilifu' singena kakuhle kumfanekiso we-transhumanism. Ngapha koko, ukuba ujongano ka-Elon Musk wengqondo uyinyani, sinokuthi sive "izulu elitsha nomhlaba omtsha" ngoqhagamshelo lwefu, kuba imidlalo ukusukela ngelo xesha iya kuba yinto enobomi kangangokuba yonke imvo yokuqonda iqonde ngqo kwingqondo yethu. iyachukunyiswa. Ukuba ukuphinda ubhale iiseli zethu kwilifu kwenza ukuba umzimba ungafiyo, uMesiya ovela kwilifu unokusinika nomzimba omtsha. Abafi banokuvuka nokuba ulwazi lwabo lwe-DNA lusekunye ingcwaba, njengoko sizama ukuzisa izilwanyana eziphelileyo ezinje ngeMammoth ukuba ibuyele ebomini namhlanje.
Nangona kunjalo, eyona njongo iphambili ingaphezulu. I-hardhum transhumanists ekugqibeleni ifuna ukuba sithi mhle kweli lizwe lebhayoloji kwaye siyidibanise nelifu ('ukuphakama emoyeni' okuvela eBhayibhileni?). Oko kuya kunika izibonelelo ezininzi. Umzekelo, awudingi izinto ezintsonkothileyo njengamarokethi abizayo kunye namafutha ukuze ubhabhe uye eMars. Akunyanzelekanga ukuba ubuyisele imeko yeMars okanye ezinye iiplanethi. Wakha indalo yedijithali engaqhelekanga kubomi bokwenyani. Lo mzuzu wokudityaniswa phakathi kwabantu kunye ne-AI waxelwa kwangaphambili kwiminyaka eyadlulayo yindoda ephezulu kaGoogle, umakhi kunye nefilosofi, ray Kurzweil. Ubiza ngalo mzuzu 'ubunye' kwaye sele elindele ukudibana phakathi kwabantu kunye ne-AI kwi2045. In eli nqaku Ndicacisa ngokweenkcukacha ukuba ibaluleke kangakanani le ngcaciso kwaye ukuba ngokwenene sisebenzisana 'nekopi yoko sele kunje'. Kuyacetyiswa ukuba ulifunde ngenqaku okanye Eli nqaku liphela ukugqitha. Kutheni le nto kucetyiswa? Ewe, yi-2019. Umzuzu oqikelelweyo wobunye (kwaye ngaloo ndlela zonke ezi zinto ziphuhlisayo ukusuka 'ekubeni kungonakali' ukuphinda ubhale iingcinga zethu kunye ne-DNA yethu, ukuya kuthi ga ngoku singene nzulu kwii-simulations) ke kuphela iminyaka ye-26 ukusuka kumzuzu wokufunda. Kungcono kakhulu kwixesha elifutshane kwaye ngokuqinisekileyo kuya kuchaphazela wena nabantwana bakho.
Funda apha kutheni uthotho lwamapolisa oluvela kuYolanthe Cabau eneDNA yesihloko nalo enegalelo ekulungiseleleni abantu ukuba bamkelwe kwiziseko zedatha yesizwe yeDNA, khon'ukuze iinginginya zabantu kungekudala zixhonywe emafini kwaye iDNA iphinde ibhalwe kwakhona.
Uludwe lwekhonkco lovimba: maxvandaag.nl
tags: ukuguga, olwaziyo, UDavid Sinclair, Dna, ngonaphakade, eziziimbalasane, Harvard, ubomi, zonyango, yintsika, ipilisi, chasene, ipilisi yokuvuselela, ukwaluphala, Inkqubo yokwaluphala, UYolanthe Cabau
30 Agasti 2019 kwi-08: 02
Ndilahla nje ikepusi yam kaMartin Vrijland ngale…
« U-Yolanthe Cabau kunye ne-polisi yamanqanaba e-DNA, imveliso entle kaJohn de Mol (njengeendaba ze-ANP)
Ngaba usisidenge unjalo nawe? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 12.413.931